Namoaka ny tatitra momba ny fetin’ny Pantekosta ny teo anivon’ny polisim-pirenena. Miisa dimy ireo olona namoy ny ainy ka ny telo amin’ireo dia olona vory saina raha zazarano kosa ny roa. Miisa 11 ireo trangana lozam-pifamoivoizana ka nisy tamin’ireo ny nitsoaka noho ny tahotra. Tao anatin’ireo loza tsotra miisa 11 dia olona miisa 19 naratra. Nahitana trangana sinto-mahery miisa valo sy halatra moto roa koa nandritra iny fety iny. Olona roa namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana ka nandositra ireo fiara nahavanon-doza. Araka ny fanazavana nomen’ny polisy, mbola karohina ilay mpamily nahavanon-doza. Nihena ny loza nitranga tamin’ity taona ity rehefa fety toy izao, araka ny fanazavan’ny polisy.
Miisa 34 ireo miaramila naiditra am-ponja noho ny tsy fanajana ny fepetra maha olombelona, araka ny tatitra nampitain’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN). Henjana, araka izany ny fanaraha-maso ireo miaramila mpampandry tany. Miaramila telo lahy voarohirohy ho nanolana vehivavy tany Isandra raha iray kosa tany Beravina Maintirano, nanapoapoaka basy sy nandrahona olona, iray tany Sambava. Miisa 27 ireo miaramila avy ao amin’ny 1 RFI Ivato voarohirohy tamin’ilay famonoana olona tany Ambohimahasoa ka nanary azy ireo teny Ampitatafika Antanifotsy. Nilaza ny teo anivon’ny MDN fa mandray andraikitra amin’ireo miaramila minia mandika lalàna sy mihoa-pefy.
Dahalo miisa 10 indray nanafika tao amin’ny fokontany Analamaro, kaominin’i Sakaraha, ny 7 jona 2019 lasa teo. lasan’ireo malaso tamin’izany ny omby miisa 53. Nanara-dia avy hatrany ny miaramila avy ao amin’ny holafy 512-n’ny 1/RM5 izay nahazo vokatra tsara satria tafaverina ny omby miisa 53. Sivily roa no naratra tamin’izany ary efa nentina notsaboina eny amin’ny hopitalin’i Toliara.